Filimka Columbus iyo Xarunta Filimada Gateway oo Soo Bandhigtay Bandhiga Filim ee Xaflada Farshaxanka Columbus - Columbus Arts Fest
Filimka Columbus iyo Xarunta Filimada Gateway oo Soo Bandhigtay Bandhiga Filim ee Bandhigga Farshaxanka Columbus
COLUMBUS, Ohio - Bandhig faneedka Columbus, oo ay soo bandhigtay American Electric Power Foundation oo ay soo saartay Golaha Farshaxanka ee Greater Columbus (Golaha Farshaxanka), ayaa ku soo dhaweyn doona Filimka Fest - bandhig filim oo ay soo saartay Film Columbus iyo Gateway Film Center, oo ay kafaala qaadeen Waxaa qoray JP Morgan Chase.
Filimada waxaa lagu dawan doonaa gegada Genoa Park ee ku taal wabiga COSI, ee daanta galbeed ee wabiga Scioto, inta lagu guda jiro fasaxa fanka ee fanka, Juun 10-12.
Jadwalka buuxa wali lama dhamaystirin, laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
Bandhiga filimku wuxuu eegi doonaa muuqaalka la jecel yahay ee Disney animated 101 Dalmatians Habeenimadii Sabtida 7-dii fiidnimo Qoyska ay ugu jecel yihiin waxa la sii daayay 1961kii, isla sanadkaas Bandhig Faneedka Columbus wuxuu bilaabay sidii Bandhig Faneed oo ku yaal cawska Statehouse Ohio. Filim kale oo qoyska saaxiibtinimo ku leh muuqaal dheer ayaa la soo bandhigi doonaa Jimcaha. Faah-faahinta dhawaan ayaa lagu dhawaaqi doonaa
Loo sameeyay si uu u koro, documentary 2022 ah oo ay soo saartay Isbahaysiga Fashion-ka Columbus, kaas oo sahaminaya waxa dhacaya marka aad maal gashato jiilka da'da yar ee naqshadeeyayaasha moodada Ameerikaanka oo aad barato warshadaha.
Documentary-ga gaaban ee Sterling Carter Bulshada la jecel yahay: Linden ka caafimaad badan. Waxaa la soo saaray iskaashi ka dhexeeya Carruurta Qaranka, Filim Columbus iyo Golaha Farshaxanka, waxay muujinaysaa dadaallada isbeddelka ee bulshada Linden.
Bandhig shaqo firfircoon oo ka yimid ardayda Farshaxanka & Naqshadeynta Kulliyada Columbus.
Qaybaha badhtamaha Ohio ee taxanaha fanka iyo dhaqanka ee todobaadlaha ah ee Warbaahinta Dadweynaha WOSU Balaadhan & Sare.
"Dhammaan kartida cajiibka ah ee Columbus ee filim samaynta iyo animation, waxaan u maleynay inay ku habboon tahay inaan soo bandhigno inta lagu jiro Bandhiga," ayuu yiri Agaasimaha Festifaalka Sean Kessler. "Barnaamijka saaxiibtinimada leh ee qoyska ayaa siin doona dadka xafladda taga fursad ay dib u fariistaan, casho ka soo qaataan baabuur cuntada maxaliga ah oo ay ku raaxaystaan ​​muuqaalada firfircoon, dukumentiyada, barnaamijyada fanka diirada saaraya iyo wax ka badan."
"Waxaan jecelnahay fursad kasta oo aan kula wadaagno Xarunta Filimada ee Gateway si aan u muujinno filim sameeyayaasha maxalliga ah," ayuu yiri John Daugherty, guddoomiyaha Filimka Columbus. "Waxaannu u mahadcelinaynaa JP Morgan Chase oo taageeray xafladdan-yar-yar ee ku jirta-festifaalka oo naga caawinaya inaan muujinno shaqada cajiibka ah ee magaalada ee filim-sameynta iyo animation-ka kumanaanka martida Festival."
Faahfaahin dheeraad ah iyo jadwal cusub ayaa laga heli karaa columbusartsfestival.org/visit/film-at-the-fest.